Njengenkwenkwezi ekhulayo phakathi kweiglavu zerabha, iiglavu ze-nitrile kufuneka zibe namandla okuthengisa. Ukujonga kurhwebo lwasekhaya nolwangaphandle, isikali sentengiso seshishini leglavu le-nitrile lisoloko lisanda okanye lidlula kulindelo. Ngokwedatha yophando lwentengiso, imarike yeglavu yerabha ikwisigaba sokugqibela sokukhula, kwaye imakethi inendlela ecacileyo yokwanda. Uphuhliso lwendlela ye-nitrile yerabha yeglavu yengozi yevalvevu yevalufa iya kuqhubeka nokukhula. Iiglavu zilahlwe yenye iiglavu zithandwa ezilahlwayo. Ezi glavu zilahlwayo ze-nitrile ziyimixube ye-organic edityaniswe kwi-acrylonitrile kunye ne-butadiene. Ziyi-latex-free kwaye ayinayo i-allergenic. Zithandwa kakhulu kwiimarike zaseYurophu naseMelika. Ukumisela umgca wemveliso yeglavu ye-nitrile unokuvula ngokukhawuleza imarike kwaye ufumane inani elikhulu lee-odolo.
Izibonelelo zophuhliso lweiglavu ze-nitrile
Njengenkwenkwezi ekhulayo phakathi kweiglavu zerabha, iiglavu ze-nitrile kufuneka zibe namandla okuthengisa. Ukujonga kurhwebo lwasekhaya nolwangaphandle, isikali sentengiso seshishini leglavu le-nitrile lisoloko lisanda okanye lidlula kulindelo. Ngokwedatha yophando lwentengiso, imarike yeglavu yerabha ikwisigaba sokugqibela sokukhula, kwaye imakethi inendlela ecacileyo yokwanda. Uphuhliso lwendlela ye-nitrile yerabha yeglavu yengozi yevalvevu yevalufa iya kuqhubeka nokukhula.
Iiglavu zilahlwe yenye iiglavu zithandwa ezilahlwayo. Ezi glavu zilahlwayo ze-nitrile ziyimixube ye-organic edityaniswe kwi-acrylonitrile kunye ne-butadiene. Ziyi-latex-free kwaye ayinayo i-allergenic. Zithandwa kakhulu kwiimarike zaseYurophu naseMelika. Ukumisela umgca wemveliso yeglavu ye-nitrile unokuvula ngokukhawuleza imarike kwaye ufumane inani elikhulu lee-odolo.
Uyilo lomxholo wovavanyo lwegreyidi yeglavu yokuvelisa
Ngamava eminyaka, iQela lobuNjineli boBunjineli beChuangmei liye laqhubeka nokwenza izinto ezintsha. Ukuthathela ingqalelo ubunzima bokumisela imigca yeiglavu ekhaya nakumazwe aphesheya, ngokudityaniswa koomatshini kunye nekhemistri, iglavu ephambili kakhulu yenzelwe njengendibano yemodyuli. Ikhonkco liqhuba ukusebenza kwesikhunta esinezixhobo ezimbini. Inkqubo yokuvelisa. Ke ngoko, siyakwazi ukwakha umgca wemveliso yeglavu kunye nokulungisa imveliso yeglavu ngezinga eliphezulu lokuguquguquka nokusebenza ngokukuko ukuqinisekisa ukuba umgca wemveliso unokuvelisa iiglavu ezikumgangatho ophezulu ukuhlangabezana neemfuno zabo bonke abathengi kwihlabathi liphela.
Inkqubo yokuxuba: ngokusebenzisa itanki yokuxuba kunye nenkqubo yombhobho, izinto ezingavunyelwanga / ipolymer / coagulant zixutywe ngokupheleleyo kwaye zithunyelwa kwindawo nganye yemveliso kumgca wemveliso.
Umgca we-2.Umveliso ophambili: ngenkqubo yedrive drive, ukubumba kwesandla kuqhutywa ngokucoca, ukudipha, ukuhlamba iklorine okanye ukutyabeka i-PU, i-leaching, ukomisa, ukwenza i-beading, pre-demoulding, de kube kugqityiwe isikhuseli seglavu.
Inkqubo yamandla: isebenzisa izitovu zomoya oshushu okanye i-boilers ukubonelela ngobushushu kwi-oveni / kwiinkqubo zokucoca, ekwangamandla ashushu okusetyenziswa kwamandla emveliso.
Izixhobo ezi-4 ezincedisayo: kubandakanya ulawulo lombane / umatshini wamanzi ococekileyo / i-chiller / isiguquli somoya kunye nezinye izixhobo ukubonelela ngamandla okuxuba, itanki yeglu, ukudiliza kunye nezinye iinkqubo.
Izixhobo ze-5.Laboratory: kubandakanya i-oveni yokuguga, uvavanyo lokuqina
6.Izixhobo zokupakisha: kubandakanya umatshini wokwenza okuzenzekelayo / umatshini wokubala ngokuzenzekelayo, unokongeza izixhobo ezizenzekelayo ezinje ngomatshini webhokisi kunye nomatshini webhokisi;
Izixhobo ze-7.Green (ezilungiselelwe ngumthengi): kubandakanya i-chlorine yegesi kunye nenkqubo yonyango lwamanzi amdaka, kufuneka idityaniswe neemfuno zokukhusela okusingqongileyo, eli candelo lilungiselelwe ngumthengi.
Ukuhlolwa kwesiqhelo iiglavu ze-nitrile zisetyenziswa njengeiglavu ezilahlwayo kwamanye amashishini apho iiglavu zitshintshwa rhoqo, ezingenakuphepha kuphela ukungcoliseka, kodwa zisindisa kakhulu iindleko, ezinje ngokulungiswa kokutya, iilebhu, iikhemikhali zombane, ukutya kunye nokucoca indlu, njl. .
Egqithileyo Uviwo lweNitrile Glove Production Line
Okulandelayo: Uvavanyo ngokubanzi umgca wemveliso yeglavu
Latex isikhuseli Izixhobo
Isixhobo seNitrile Glove Equipment
Nitrile isikhuseli Machine
Nitrile isikhuseli Ukwenza Machine
Line zilahlwe Production Line